BOKY Hividy Archives - Pejy 2 amin'ny 10 - Afrikhepri Fondation
Ny fivavahana afrikana - Mbog Bassong (Boky)
Vao hitantsika teo amin'ny faran'ny toko faha-3 fa ny Kristianisma dia avy amin'i Kamit nieritreritra ny vanim-potoan'ny Farao dia ny maha-zava-dehibe ny hatsarany. Ireo hevitry ny fahaterahan'i ...
Ny boky farany momba ny autobiografika Maya Angelou, mpanoratra sy mpikatroka afrikanina-Amerikana, izay nivoaka tao Frantsa volana vitsivitsy taorian'ny nahafatesany, i Lady B dia nanao fanambarana mahafinaritra tamin'ny reniny. Maya Angelou ...
Raha mbola mainty aho - Maya Angelou
Olona tandindona amin'ny tantaran'ny Etazonia, Maya Angelou dia vatana sy fanahy manolo-tena amin'ny taonjato faha-20 Amerikanina. Ny tantaran'ity boky ity dia nanomboka tamin'ny 1957, rehefa tapa-kevitra ny ho tonga mpanoratra, ...
Alchemy ara-panahy - Omraam Mikhaël Aïvanhov
Ny tena alchemy dia miara-miasa amin'ny toro lalan'ny lahy sy vavy izay miasa amin'ny zavaboary rehetra. Amin'ny fahatsapana (ny masoandro) sy ny eritreritra (ny volana) dia hahatratra ...
Famaranana famaranana - Petr Ludwig
Efa nanondraka ny zavamaniry tao amin'ny birao ve ianao rehefa manana rakitra maika hiatrehana anao, very ny tenanao ao amin'ny media sosialy fa tsy manomana ...
Quilombos niverina palmares
Ny quilombos any Brezila, ny fivorian'ny andevo mandositra, dia niparitaka eraky ny faritany nandritra ny taonjato telo sy tapany izay naharitra tany. Ny tantaran'ny quilombos dia iray ...
TV Lobotomy: Ny marina ara-tsiansa momba ny vokatry ny fahitalavitra
Sophie, 2 taona, dia mijery tele mandritra ny 1 ora isan'andro: izany dia mampitombo ny fahaizany miatrika olana. Kevin, 4, dia mijery fandaharan'asa tanora mahery setra: izay ...
Ny tantara tsy mampino an'ireo andevo nanadino an'i Tromelin notantaraina tamina boky tantara an-tsary
Tamin'ny 1761, sambo iray avy amin'ny orinasa Indiana Atsinanana frantsay, nitondra andevo Malagasy 160, dia rava tao amin'ny nosy kely iray tany amin'ny Ranomasimbe Indianina. Amin'ireo 90 sisa velona ...
Tantaran'i Afrika (Volume 8)
General History of Africa (Boky 8) an'ny UNESCO dia mandalina ny vanim-potoana 1935 ka hatramin'izao. Manazava ny fampandrosoana ara-politika, ekonomika ary kolontsaina ny kaontinanta ...
Ubuntu: Kolontsaina fandriampahalemana any Afrika
Talohan'ny nahatongavan'ny fiangonana, ny moske, ny Baiboly na ny Koran, ny Afrikana dia nampiasa ny soatoavina nentin-drazana nentin'ny razambeny mba hiatrehana ireo ady. Ireo soatoavina ireo dia ...
Ny tsiambaratelo - Rhonda Byrne
Ny tsiambaratelo dia mirakitra ny fahendren'ireo tompoin'ny vanim-potoana maoderina, amin'ireo lehilahy sy vehivavy izay nampiasa azy io hiantohana ny fahasalamana, fanambinana ary fahasambarana. Amin'ny fampiharana izany ...
Afrika ho an'ny Dummies
Kely no fantatra momba ny kaontinantan'ny maha-olombelona. Ny tantarany nandritra ny arivo taona dia namorona andrim-panjakana politika izay niafara amin'ny fanjakana lehibe, toa an'i Mali manankarena na Etiopia sahy ....
Zavamaniry mahasalama ho an'ny hatsaran-tarehy voajanahary
Passionate, Sala Njoya dia teratany frantsay Kamerona ary avy amin'ny Bamoun. Élise Igalas dia tovovavy Gabonese tanora avy amin'ny foko Nzebi sy Galoa izay ...